Ungaguqula kanjani i-Word Document ibe yi-PDF: Zonke Izindlela | Izindaba zamagajethi
IZwi ne-PDF amafomethi amabili esisebenza ngawo cishe nsuku zonke kukhompyutha yethu. Kungaba umsebenzi noma isifundo. Ngaphezu kwalokho, isenzo esikwenza kaningi ukuguqula ifomethi eyodwa iye kwenye. Sesivele siyibonile indlela esingabona ngayo guqula ifayela le-PDF libe yifomethi yefomethi yeZwi. Yize manje yisikhathi sokwenza inqubo ephambene.
Inqubo iyefana kulokhu, ngaphezu kokuba nochungechunge lwezinketho ezitholakalayo ukukwazi ukwenza yonke le nqubo. Ngakho-ke, umsebenzisi ngamunye uzokwazi ukukhetha indlela ebafanela kahle kuleso simo, ukuze bakwazi ukusebenza nala mafomethi amabili ajwayelekile, lapho singenza khona izenzo eziningi, uzicindezela kanjani.
1 -Google Docs
2 I-Microsoft Word nabanye abahleli bamadokhumenti
Indlela yokuqala esingasebenzisa kuyo kulokhu ukusebenzisa i-Google Amadokhumenti, isihleli sedokhumenti yeGoogle esisithola kuGoogle Drive. Ukuze wenze lokhu, kufanele uqale ulayishe idokhumenti efwini. Singakwenza kalula ngokuhudulela idokhumenti ku-Google Drayivu kukhompyutha. Uma isilayishiwe, kufanele uchofoze inkinobho yegundane engakwesokudla kuyo bese ukhetha u-Open With.Kusuka kokukhethwa kukho okuvelayo, kufanele ukhethe ukuvula nge-Google Amadokhumenti, ukuze ngokulandelayo sibe nedokhumenti online.
Ngokuvula idokhumenti esibukweni, kufana nokuthi besisebenza noLizwi. Ngakho-ke, singahlela idokhumenti nganoma yisiphi isikhathi uma sifisa. Yize okubalulekile kuleli cala ukukwazi ukulilanda njengefayela ngefomethi ye-PDF. Okwakho, kufanele uchofoze kufayela, etholakala phezulu ngakwesokunxele kwesikrini.
Ukwenza lokhu kuzoletha izinketho ezahlukahlukene esibukweni. Enye yazo ukulanda. Lapho sibeka isikhombisi phezu kwaso, sizobona ukuthi ngakwesokudla kukhona uchungechunge lwamafomethi ahlukile esingakwazi ngawo landa le dokhumenti yamagama. Enye yamafomethi kulolu hlu yi-PDF, ngakho-ke kufanele sichofoze kuyo.
Ngakho-ke ukulanda kuqala., ngokuqondile vele ku-PDF kukhompyutha yethu. Ngemuva kwalokho singakwazi ukuyilondoloza ngokuhamba kwesikhathi lapho sifuna khona, noma ilandwa ngokuzenzakalela kufolda yokulanda. Kulula kakhulu ukukwenza, njengoba ubona. Sivele sinalo ifomethi ngefomethi oyifunayo, kungaba ukuyiphrinta noma kufanele siyithumele ngeposi.
I-Microsoft Word nabanye abahleli bamadokhumenti
Okwesibili, kuyinto ethi singakwenza futhi ngqo kwiMicrosoft Word. Njengoba kuzinguqulo zakamuva kakhulu zomhleli wedokhumenti, lo msebenzi wethuliwe, ovumela ukulondolozwa kwedokhumenti kuzo zonke izinhlobo zamafomethi ahlukile. Uhlu lwamafomethi lubanzi impela. Ngakho-ke singalanda idokhumenti okukhulunywa ngayo ngqo njenge-PDF. Ngakho-ke, uma umhleli wedokhumenti efakiwe, kufanele uvule ifayela ofuna ukuliguqula.
Inqubo iyefana naleyo esiyilandele esigabeni esedlule. Lapho singaphakathi kwedokhumende okukhulunywa ngayo eZwini, kufanele sichofoze kufayela, engxenyeni engaphezulu kwesokudla. Ngokuya ngohlobo onalo, kuzokusa ewindini elisha noma imenyu yokuqukethwe enezinketho ezahlukahlukene zizovela. Noma kunjalo, kufanele uye ku-Save as…. Kukulesi sigaba lapho uzokwazi ukugcina khona umbhalo we-Word ngamafomethi amasha.
Kumele ukhethe ifomethi ye-PDF yohlu olushilo, unikeze idokhumenti igama bese ukhetha indawo ukuze uligcine kukhompyutha. Ngale ndlela sekuvele kungenzeka ukuthi kube nefayela okukhulunywa ngalo ngale fomethi ye-PDF. Enye indlela evelele ukuba ntofontofo ukufeza kukhompyutha.
Futhi, akuyona into enqunyelwe kuphela kwi-Microsoft Word. Uma usebenzisa omunye umhleli wedokhumenti, imvamisa unokufinyelela kokungenzeka okufanayo. Uma kwenzeka usebenzisa abahleli abanjenge-Open Office noma i-Libre Office, esigabeni sefayela imvamisa inketho yokugcina njenge. Ngaphakathi kwayo kuvame ukubakhona kokuyilondoloza njenge-PDF. Ngakho-ke, kuyinto engenziwa kungakhathalekile ihhovisi suite elifakwe kukhompyutha ngaleso sikhathi. Inqubo iyefana kuzo zonke izimo.
Kunjalo, kunamakhasi amaningi wewebhu esingawasebenzisa kule nqubo. Kuzo, sizokwazi ukulayisha idokhumenti ngefomethi ye-Word bese sikhetha ukuthi izolandwa ngokuhamba kwesikhathi njenge-PDF. Ngakho-ke akudingeki ukuthi senze noma yini, kepha iwebhusayithi uqobo luzokwenza yonke inqubo. Kukulungele impela ukukwenza, futhi kunamakhasi amaningi atholakalayo namuhla.
Ezingeni lokusebenza, awekho kulawa makhasi e-web aletha izinkinga eziningi kakhulu. Kumele ulayishe idokhumenti, noma uyihudulele kuwebhu noma ukhethe kufolda uqobo kwikhompyutha. Ngemuva kwalokho, khetha ifomethi yokukhipha kwayo, I-PDF kulokhu, bese uyinika ukuthi iqale. Kuyindaba yemizuzwana embalwa noma imizuzu embalwa futhi inqubo isiphelile. Manje uzokwazi ukuyilanda ngale ndlela entsha kukhompyutha yakho. Kwezinye izimo ilandwa ngokuzenzakalela lapho inqubo yokuguqula isiqedile.
Ukukhethwa kwamakhasi atholakalayo kulokhu kubanzi. Vele useshe ku-Google ukuze ukwazi ukukuqinisekisa. Mhlawumbe kunezinketho eziningi ozijwayele. Okuyaziwa kakhulu futhi okusebenza kahle kakhulu kulokhu:
Noma iliphi kulawa makhasi e-web lizokufeza ngokuphelele ukusebenza okufunwayo futhi liguqule idokhumenti efunwa umsebenzisi. Abanayo imfihlakalo maqondana nokusebenza, kuyafana kuzo zonke izimo. Ngakho-ke ukukhetha kwewebhusayithi eyodwa noma enye akuyona into okufanele ikhathazeke kakhulu. Bonke benza umsebenzi wabo kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungaliguqula kanjani iZwi libe yi-PDF
Sihlaziya isikali esihlakaniphile seKoogeek S1, silawula isisindo sakho kalula